ရထားထက်ပိုကောင်းတဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအများအပြားသည် Modes ရှိပါတယ်မဟုတ်, သို့သော်မြစ်ရုဇ်တော်တော်လေးနီးစပ်လာ! ဒါဟာဥရောပမှာ၏ပျော်မွေ့ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်တစ်ဇိမ်ခံနှင့်ဖြည်းဖြည်းနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, မြင်နေမြို့ကြီးများ, ဒေသများ, အသစ်တစ်ခုရှုထောင့်ကနေနိုင်ငံများ. စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနေရာများကိုသင်လေ့လာနိုင်သည်…
ပူနွေးသောရာသီဥတုသေးကျော်မဟုတ်ပါဘူး. အချိန်နှင့်ယခုလတောင်ပိုင်းအီတလီသို့သွားရောက်မယ့်အကြောင်းပြချက်ကောင်းနေဆဲရှိပါသည်! တောင်အီတလီမှာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိတယ်. တောင်ပိုင်းအီတလီမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးနေရာများပါဝင်သည်; သိသိသာသာကမ်းရိုးတန်း၏လှပသောပို်, စုံလင်သောကမ်းခြေမြင်ယောင်, အလွန်နှစ်သက်ဘွယ်ကောင်းသော…
သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားဘို့ဤအထိပ်တန်းသိကောင်းစရာများသင့်ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်လျော့ပါးကူညီသင့်တယ်. ပါစေရဲ့ကရင်ဆိုင်ရသောကြောင့်, သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူခရီးသွားစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပါသည်! သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှုင်, အိမ်မှာသို့မဟုတ်အခြားသူများရဲ့စောင့်ရှောက်မှု၌သင်တို့၏တိရိစ္ဆာန်များထွက်ခွာ၏အတွေးဖြစ်ပါသည်. Obviously no one…
ရက်အနည်းငယ်ကွာလာပြီစဉ်းစား? အဘယ်အရာကိုအချို့သောနေ့ကခရီးစဉ်ပဲရစ်ကနေရထားနဲ့သွားဖို့စီစဉ်အကြောင်းကို? ပြင်သစ်ရထားတစ်ဦးအစာရှောင်ကြသည်, ပြင်သစ်တွင်လှည့်ပတ်ရရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့် Eco-friendly လမ်း. ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားနှင့်အတူ, you’ll be able to book in minutes…
ဥရောပမှာအများစုကအံ့မခန်းတက္ကသိုလ်များရှာဖွေနေ? ထို့နောက်အပေါ်ကိုဖတ်ရှု! ကျနော်တို့တက္ကသိုလ်ရွေးချယ်ရာတွင်အရေးပါသောရွေးချယ်မှုသိ. ဒါပေါ့, တဦးတည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ရာတစျခုသို့တက်ရောက်ရန်ရွေးချယ်တဲ့အခါတက္ကသိုလ်ကမ်းလှမ်းသောသင်ကြားရေးနှင့်သင်ယူမှုအဆောက်အယူရမယ်. သို့သျောလညျး, sometimes a…
အဘယ်သူသည်လာသောအခါဖြစ်နိုင်သမျှပိုက်ဆံကယ်တင်လိုပါဘူး? ခရီးသွားလာစျေးကြီးရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့် Save ကိုတစ်ဦးကရထားနှင့်သင်၏ရထားလက်မှတ်ဝယ်ယူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီဖြင့်စီစဉ်နေဖြင့်, သငျသညျကုန်ကျစရိတ်ခေါ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်. ဤအနှင့်အတူခရီးသွားနေချိန်မှာပိုက်ဆံ Save 10 tips on your next vacation…
ငြိမ်းချမ်းစွာနှင့်ပျော်စရာ. မိဘများအနေဖြင့်သူတို့၏အားလပ်ရက်ခရီးသွားခြင်းအကြောင်းကိုကလေးများနှင့်ပြောဆိုသည့်အခါသင်ကြားလေ့မရှိသောစကားလုံးနှစ်လုံး. ဒါကြောင့်, မီးရထားဖြင့်ဥရောပမှကလေးများနှင့်ခရီးသွားခြင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်များကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်. There is just something about trains that calms children…
ဥရောပ၌စပျစ်ရည်ကိုဒေသများတွင်သွားရောက်လည်ပတ်တိုင်းစပျစ်ရည်ကိုကျွမ်းကျင်သူတစ်အိပ်မက်ဖြစ်ပါသည်. Stunningly လက်ရာမြောက်သောစပျစ်ဥယျာဉ်, ပူနွေးခြင်းနှင့်နေသာရာသီဥတုက, ဝိဇ္ဇာအတတ်အားတောင်စောင်း, နှင့်ကောင်းမွန်သောအစာအာဟာရသည်ဤထိပ်တန်းစပျစ်ရည်ကိုဒေသများတွင်သတ်မှတ်. If you’reawine lover and want to see Best Wineries In Europe And How To…
အဘယ်အရာကိုမျှအားလပ်ရက်သို့မဟုတ်အားလပ်ရက်ပြောပါတယ်, အတော်လေးရေပန်းခြံနဲ့တူ, သငျသညျမထငျမ? နေရောင်, ရေခဲမုန့်, တချို့အကြီးအကျယ်ရေဆလိုက်ဆင်းလျှောနွေရာသီအားလပ်ရက်များအတွင်းမှာပျော်စရာအဘို့အဆုံးစွန်စာရွက်ဖြစ်ပါသည်! We did the tough job of testing out the Best Water Parks…